hercules Archive - Xuquuqda Aadanaha & Farshaxanka Fudud ee ∴ PixelHELPER Foundation
Dhirta goynta halkii ay ka qodmi ​​lahayd miinooyinka dhulka lagu aaso
Post Sticky By Oliver Bienkowski On 5. Nofeembar 2011
Ku dhuuqida digaag geedo leh geedo dhameystiran iyo bacrimiyo
Dhir goynta halkii miinooyinka dhulka lagu aasi lahaa. Wargeyskii ugu weynaa ee ka soo baxa Marooko ayaa maanta ka warbixinaya soo jeedinteena baarlamaanka Australia si ay uga codsadaan Boqorka Marooko inuu na siiyo diyaarad miinada Hercules-C130 si aan ugu badalno dib u dhiraynta moroko & keynta Australia. Warshad yar oo halkaan ku taal meesha aan ka degan nahay Morocco ayaa loo maleynayaa inay soo saari doonto fallaaraha geedka oo markaa la tuurayo. Laakiin waxba ma qaban karno hadaan gacan naga helin boqorka Morocco. Maaddaama uusan ka jawaabin waraaqaheenna ugu dambeeya, ma odorosi karno wax fursado ah, laakiin waxaan ku faraxsanahay waxyaabaha layaabka leh ee wanaagsan.
Dareemaha geed ka soo daabacaha 3D
Dhirta goynta halkii ay ka qodmi ​​lahayd miinooyinka dhulka lagu aaso Abriil 21st, 2020Oliver Bienkowski